Ụdị pine na Spain: àgwà na ihe onwunwe | Green Renewables
Portillo nke German | 24/05/2022 12:00 | Gburugburu
Na Spain anyị nwere nnukwu osisi dị iche iche. Otú ọ dị, otu n'ime ihe ndị kasị ukwuu na ndị kasị mara amara bụ pine. E nwere dị iche iche ụdị pine na Spain na nke ọ bụla n'ime ha nwere ihe pụrụ iche e ji mara. Osisi pine bụ ụdị osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke sitere na ezinụlọ pine ma nwee ike itolite ruo mita 40. O nwere alaka kwụ ọtọ nwere mgbawa na ogbugbo aja aja. Ka osisi ndị a na-etolite, alaka ndị dị ala na-apụ n'anya, na-eme ka osisi ahụ yie nke ọma. Akwụkwọ pine na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, 3 ruo 8 cm n'ịdị elu na ọdịdị dị nkọ.
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị banyere isi ụdị osisi pine na Spain dị adị na ha bụ isi àgwà.
1 Ụdị pine na Spain
1.1 Radius Pinata
1.2 Pinus usoro mmụta
1.3 Pinus enweghị atụ
1.4 Pinus ịnyịnya
2 Njirimara nke pine na Spain
Ogo osisi ya na nrụpụta ya dị elu na obere mgbanwe dị mkpirikpi na-enwe mmasị dị ukwuu. A na-eji osisi nweta ihe dị iche iche: ibé, mputa nka nka, urughuru osisi na onyinye.
Pinus usoro mmụta
Maka mmezu nke ibé, ngwá ụlọ, parquet ala, ogidi, wdg. A na-ejikwa ya eme nkụ na ọkụ. Taa, a na-eji akụkụ ndị dị mma na-emepụta ngwá ụlọ ndị a na-egbuke egbuke dị elu, ogwe osisi, na ụdị ndị ọzọ, ebe a na-eji akụkụ ndị dị ala na-emepụta tile, decks, na ihe ndị ọzọ na-adịghị adịgide adịgide. Ọtụtụ ụlọ ụka dị na Ganadería del Norte ka e ji osisi pine rụọ, ma ọ bụ maka elu ụlọ. maka ebe-ichu-àjà, ma-ọbu n'ihi ihe-nkọba nile ha chọrọ. A na-ejikwa ya n'ọtụtụ ebe n'iwu ụlọ na obí eze, dị ka San Lorenzo del Escorial.
Pinus enweghị atụ
Uru pine ojii dị na Pyrenees dị ugbu a nwere oke n'ihi na a gbanweela ọhịa ndị a ruo ọtụtụ narị afọ gaa n'ebe ịta nri nke alpine, a na-achịkọtakwa nkụ n'ụlọ ndị ọzụzụ atụrụ na atụrụ ndị dị n'ebe dị elu maka ikpo ọkụ na isi nri. Ọtụtụ n'ime ọhịa pine anyị dị ugbu a dị mkpọda ugwu, ebe okwute okwute ma ọ bụ ala ndị ọzọ na-adịghị mkpa maka ọzụzụ atụrụ.
Ọ bụ osisi na-acha ọcha, osisi obi na-abụkarị salmon aja aja, ọ bụghị ezigbo resinous, dị mfe ịkpụ, àgwà agbanwe agbanwe, n'ozuzu ọkara n'ihi oke oke.
A na-esi n’osisi pine enweta mkpụrụ osisi ndị ahụ, a na-eji ya eme achịcha na mkpụrụ osisi. Ma ọ bụghị nanị na ọ bụ isi iyi nri maka ụmụ mmadụ, kamakwa maka ọtụtụ anụmanụ, gụnyere nnụnụ, òké na ọbụna anụ ọhịa. A na-emepụta painiapulu okpukpu atọ kwa afọ na iwe ihe ubi pine na-agbanwe agbanwe. Ụfọdụ ụdị pine nwere ike inwe mkpụrụ pụrụiche nke ruru cones 3.000. Ogo nke osisi ya dị mma, ma nnukwu resin ọdịnaya na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma maka ụlọ ọrụ na nkà. A na-ewepụta tannins n'ụgbụgbọ iji gbarie akpụkpọ ahụ.
Isi ihe omume ntụrụndụ ya bụ nchịkọta plastik, ịkụ azụ na mmepụta osisi. A na-ewepụta ngwaahịa abụọ bụ isi na resin. Usoro nke inweta resin pine etolitela ka oge na-aga, site na usoro oge ochie nke kwụsịrị na ọnwụ nke osisi pine ruo na usoro ndị na-adịghị eme ihe ike taa. Taa, anyị ka nwere ike ịhụ akụkụ resinous nke Hugues ịkpụ pine, nke na-egbutu ihe dị ka 15cm n'ogologo, nke na-ewu ewu na narị afọ nke XNUMX dum.
Osisi Canary bụ ụdị a na-adịghị ahụkebe n'etiti ụdị pine n'ihi na ọ dị mfe ịmaliteghachi n'ime ogwe na ogwe ya ma nwee ike ịmalite mgbe ọkụ gasịrị, ma nke a emeela ka ịkụ ya n'ọtụtụ ebe n'ihe ize ndụ nke ọkụ.
O nwere resin osisi buru ibu nke a ga-eji na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nka, mana A na-enwe ekele dị ukwuu mgbe a na-eme ọwa ọkụ, karịsịa nkụ, nke bụ akụkụ etiti kachasị ọchịchịrị.
Njirimara nke pine na Spain
Osisi pine bụ osisi buru ibu nke na-anọgide na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'afọ niile, alaka ya na-abụ pyramidal mgbe ọ na-eto eto ma na-agbasawanye na alaka ka ha na-eru nso ntozu. Ọ nwere oke mkpọnwụ nke nwere ihe mkpuchi resin gburugburu ya. Akwụkwọ ndị a kapịrị ọnụ dị ka agịga.
A na-eji akwa osisi kpuchie mkpụrụ ya ma n'ime ya bụ mkpụrụ osisi. Enwere ụdị agịga pine atọ:
isi, nke bụ naanị na eze.
bracts (akụkụ ndị na-echekwa nri maka ifuru), nke dị ntakịrị karịa akwụkwọ nkịtị dị nso na alaka ụlọ ọrụ ma nwee ọdịdị triangular mgbe e kewapụrụ ya na isi.
akwukwo okenye, ndị a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adị ka agịga, a na-ahụkwa ha n'ụyọkọ ruru akwụkwọ triangular ise.
Mkpụrụ osisi ahụ nwere àgwà nke ịbụ cones na-emepụta, ụfọdụ n'ime ha na-anọgide na-emechi ruo ọtụtụ afọ ruo mgbe ihe na-akpali ha, dị ka ọkụ, imeghe ma tụba mkpụrụ n'ala. A na-akpọ ihe ọmụmụ ọmụmụ a bụ serotonin (mmeghari ọkụ na ụfọdụ ụdị).
Pine nwere ọtụtụ ihe, uru bụ isi bụ ọdịnaya turpentine nke ogbugbo ya. Ọ bụ ezie na ihe a na-agbakasị ahụ akpụkpọ ahụ, ọ na-eji ihe dị iche iche eme ihe kemgbe oge ochie. Akụkụ pine ndị a na-ejikarị eme ihe bụ: resin, buds, sage, bọtịnụ na osisi.
A na-enwekwa ekele maka uru ya na culinary, ịchọ mma na ụlọ ọrụ osisi. Ogologo oge ejirila mkpụrụ osisi pine mee achịcha ma tinye ụtọ na salads, ndochi na nri n'ụdị efere dị iche iche, a makwaara ya dị ka 'pesto'. A na-agwakọta agịga pine na achịcha achịcha na galik a mịrị amị.
A na-eji ihe ndị balsamic nke pine mee ihe n'ọtụtụ ebe na ụfọdụ spas, tubs ịsa ahụ, senti na tonic mere site na osisi pine.
Na Europe, a na-akpọ achịcha ọdịnala sitere na ogbugbo osisi a "pettu". Omenala ya malitere n'oge nri dị ụkọ. Ogologo oge ejirila agịga pine mee ihe na kichin maka ísì ụtọ ha na-esi ísì ụtọ.
Omenala nri na-atụgharị gburugburu ụwa mgbe a na-eri ihe ọkụkụ ndị a na-eri anụ ọhịa, bụ́ ndị furu efu site na ịzụ ahịa. Pine bụ nwa amaala ma na-eweta uru gburugburu ebe obibi na mbara ala, na-emepụta ihe ụtọ ọhụrụ na-akpalite uche.
Iji jiri agịga pine mee nri anyị, a ga-ebu ụzọ mee ka ịcha ọcha. Ekwesịrị itinye ha na mmiri esi mmiri ihe dị ka 20 sekọnd. Ozugbo oge a gasịrị, a na-etinye ha na mmiri ice. Nke a na-enyere aka ihicha ha ma mee ka agba ha na-egbuke egbuke.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị pine na Spain na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ụdị pine na Spain
Kedu ihe bụ asbestos n'ime ụlọ